Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa Russia » Russia ga -agbakwunye modul ndị njem na ọdụ ụgbọ elu ya na -esote
Airlines • Airport • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Akụkọ na -agbasa Russia • Oghere Uzo • Technology • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Onye isi ụlọ ọrụ Russia State Space Corporation (Roscosmos) Dmitry Rogozin
Roscosmos agaghị etinye aka na ụgbọ elu ime obodo, onye ọrụ mbara igwe Russia kwuru, mana ụlọ ọrụ mbara igwe Russia ga -etinye aka n'ịzụlite njem nlegharị anya dị ka akụkụ nke mmemme ụgbọ elu orbital.
Ọrụ dịịrị Russia isonye na mmemme ISS ga -agwụ na njedebe nke 2025.
N'April, 2021, Russian Prsident kwadoro atụmatụ maka Ọdụ Ọrụ Orbital Russia ọhụrụ.
Onye isi ala Russia na -atụ aro imepụta modul ọdụ ụgbọ elu dị iche maka ndị njem.
Ndị ọrụ ụlọ ọrụ na-ahụ maka mbara igwe Russia tụrụ aro ka ha rụọ modul pụrụ iche maka ndị njem na ọdụ Ọrụ Orbital Service Orbital (ROSS), nke Moscow ga-anọchi maka nnọchi International Space Station (ISS) merela agadi.
Russia ka ọ gbakwunye modulu ndị njem na ọdụ ụgbọ elu ya ọzọ
Dị ka isi nke Ụlọ Ọrụ Ọchịchị Russia State (Roscosmos) Dmitry Rogozin, Kọmitii Sayensị na Nka Roscosmos tụlere okike ROSS na nzukọ ya na July 31.
Onye isi Roscosmos kwuru, "Atụrụ m aro na ọrụ a kwesịrị ịgụnye imepụta modulu dị iche maka ndị ọbịa."
Ebe ọrụ dịịrị ndị Russia isonye na mmemme ISS na -abịa na njedebe na 2025, ọ dịla anya a na -akọ nkọ maka ọdịnihu nke naanị ọdụ ụgbọ elu ụwa.
N'April, 2021, Onye isi ala Russia Vladimir Putin kwadoro atụmatụ maka ọdụ ụgbọ elu Orbital Russia ọhụrụ, bịanyere aka na ntinye maka ọdụ oghere nwere modulu atọ ruo asaa.
Ọ bụrụ na emepụtara mkpebi ịgụnye akụkụ maka ndị njem, ọ ga -aga n'ihu bụ omenala isonye na Russia na njem nlegharị anya. Na 2001, onye injinia America Dennis Tito ghọrọ onye njem nlegharị anya mbụ iji kwado njem nke ya na mbara igwe, rute na roket Soyuz TM-32 Russia.